Xildhiban katirsanaa Baarlamaanka Puntiland oo Muqdisho lagu Aasay”Sawirro” – Radio Muqdisho
Allah u naxariistee Marxuum Aadan Xaaji Xuseen oo ka mid ahaa golaha wakiilladda Mamulka Puntland oo shalay kooxo dhagar qabayaal ah ay ku dileen degmadda Hodan ee gobolka Banadir ayaa manta lagu aas-say Qabuuraha Cisbitaalka madiina ee magaalada Muqdisho.
Aaska ayaa waxaa ka qayb galay guddoomiye kuxi-geenka labaad ee Barlamaanka Soomaaliya Xubno ka tirsan labada Gole ee Dowladda Federaalka ah.
Dadkii ka qayb galay Aaska Allah u naxaristee Marxuum Aadan Xaaji Xuseen ayaa allah kaga baryey in uu ka waraabiyo jamnadii fardowso Samirn ka siiyo Eheladii iyo Qaraabadii uu ka baxay.
Wasiirrada Dhalinyaradda Maamul goboleedyadda Puntland iyo Jubbaland oo Warbaahinta Qaranka la hadlay ayaa tacsi u diray qoyskii Eheladii uu ka geeriyooday marxuumka,iyagoona ka dalbaday hay’adaha amniga in ay ku dadaalaan in gacanta lagu soo dhigo kuwii ka dambeyey dilka Xildhibaankaan ka tirsanaa golaha wakiilladda Puntland.
Wasiirka gaadiidka iyo Duulista hawada Cali Axmed Jaamac “Jangali” ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo goobta Aaska ka hadalay ayaa sheegayy in Dolwadda ay gacanta ku soo dhigidoonto dhagar qabayashiii ka dambeyay dilka mudahaha isla markana ay aad kaga xun tahay dilalka loo gaysanayo dadka wax tarka u ah bulshada.
Guddoomiye ku xigeenka labaad ee Barlamaanka Federaalka Soomaaliya mudane Mahad Cabdalla Cawad ayaa tacsi u diray Guud ahaan shacabka reer puntland isagoo tilmaamay in dhagar qabayashii dilay Xildhibaankan ka tirsanaa golaha wakiillada maamulka Puntland gacanta lagu dhigi doono waxa uuna ku baaqay in meel looga soo wada jeesto sidii loo cirib tiri lahaa dambiiliyaashan.
Barakacayaal dalbaday gargaar